नेपाली संगीतिक क्षेत्रका अमर नक्षत्र स्व. अरुण थापा मगरः अलविदा – Todaypokhara
थापाको एक सम्झना ः ढुङ्गेल
वि.स.२०४० साल तिर सोल्टी होटलमा गीतकार सुवास चन्द्र ढुंगेलले पहिलो पटक अरुण थापालाई भेटे । अरुण त्यहीँ काम गर्थे । गीतकार ढुंगेलले एउटा एल्बमको तयारी गर्दै थिए । आफ्ना दाजुको सहयोगमा उनले थापालाई भेटेका थिए । उनले आफ्नो इच्छा व्यक्त गरेपछि अरुणले सुवासलाई भने, हुन्छ तिम्रा गीतहरु मलाई देऊ मलाई मनप¥यो भने गाउँछु । उनले दुई तीन वटा गीत दिए । अरुणले दुई तीन वटा हैन १२÷१३ वटा गीत मागे । उनले सोधे, किन १२÷१३ वटा दाई ?अरुणले जवाफ फर्काए, मेरो गीत गाउने बेग्लै तरिका छ । ती गीतबाट म आफूलाई मेल खाने र मेरो जीन्दगी मिल्ने गीत छानेर गाउँछु । सुवासले अरुणको हातमा थमाएका गीतमध्ये ‘चोट
के हो व्यथा केहो’, बोलको गीतलाई विशेष मनपराए । उनले भने सुवास भाई, यो गीत म गाउँछु, कसैलाई नदेऊ है । आफ्नो जीवनमा असफल प्रेम भोगेका अरुणसँग मनमा प्रेम विछोडको गहिरो पीडा थियो । त्यो गीतमा उनले आफ्नो जीवनको पीडा पाए । त्यसैले उनले त्यो गीत आफ्ना लागि बुक गरे ।
अरुण भन्छन् ः जीवनमा सबथोक पाएँ र फेरि सबै गुमाएँ
निकै कम उमेरमै गीत संगीतमा होमिएका अरुण थापा मगरले सांगीतिक प्रस्तुतीको रुपमा पहिलो पटक क्याम्पसमै गीत गाए र क्याम्पसमा गीत गाएरै उनी प्रेममा परे ।पोखराकी नेवार परिवारकी विमलासँग उनको प्रेम गहिरो थियो ।करिब २ वर्ष जति प्रेममा परे यो कुरा केटीको परिवारलाई स्वीकार्य थिएन । वि.स. २०३४÷०३५ साल तिरको कुरा हो । (थापाको अन्तिम अन्तर्वाता)प्लेनमा भाग्ने योजना बनाएका उनीहरु अन्तिम समयमा फ्लाइट क्यानसिल भएपछि ट्याक्सीमा काठमाडौं भागेका थिए । ६ महिना उनीहरूसँगै बसे तर परिवारको पछि झुक्याएर विमलाको अन्तै विवाह गरिदिए । त्यसपछि अरुणको जीवन भताभुङ्ग भयो । नशा उनको पीडा भुलाउने बहाना बन्यो तर छातिभित्र चोट बोकी बाँचेका अरुणले लिएको नशाको साहारा जीवन छोट्याउने माध्ययम मात्र थियो । उनले दोस्रो विवाह पनि गरे, एउटी छोरी जन्मेको केही समयपछि त्यो पनि सकियो । उनीमाथि पीडाको अर्को खात थपियो ।
अरुणका साथीहरू भन्छन् अरुण बिग्रनुमा कसैको अभिभावकत्व नपाउनुलाई मान्छन् । परिवारमा कोही बिग्रियो, कुलतमा फस्यो भने उसलाई कि बाबु आमा कि श्रीमतीले सुधार्न खोज्छन तर अरुणलाई सुधार्ने कोही भएनन् । उनी त्यो बाटोमा हराए जहाँ जान अत्यन्तै सजिलो थियो तर फिर्ता आउन उस्तै कठिन्, उनी फर्किन सकेनन् । थापाले थोरै तर गुणस्तरिय गीत गाए । जम्मा ३६ वटा मात्र गीत गाएर यस स्तरको प्रसिद्धि प्राप्त गर्ने उनी सम्भवतः एक्ला नेपाली गायक हुन् । उनी कतिसम्म चर्चित थिए भने सन् २००३ मा बिबिसीले गरेको संसारका उत्कृष्ट १० गीतको सूचिमा उनले गाएको ‘ऋतुहरुमा तिमी हरियाली बसन्त हौ’ बोलको गीतले सातौं स्थानमा आफूलाई अटाएको थियो । उनको यो सफलताबाट जोसिएका झम्सीखेलमा स्थानीयले उनको सालिक बनाए जसलाई आज अरुण थापा चोकले चिनिन्छ ।
उनले नेपाली गीतसँगै एउटा भजन र मगर भाषाको भाषिक गीत पनि गाएका छन् । ती पनि उस्तै सुनु सुनु लाग्नेछन् । यी श्रष्टा बितेको देढ÷दुई दशक बितिसकेको छ तर उनका गीत अझै जीवन्त छन् । आज पनि उनलाई मनपराउनेहरुको जमात ठूलै छ । अन्तमा उनी भन्छन्, “जीवनमा सबथोक पाएर फेरि सबथोक गुमाए । कहाँ पुग्नु थियो मलाई कहाँ हो कहाँ पाइला बढाए । तर म यस्तै अन्योलमा रमाउने मान्छे । मलाई रुखो सहानुभूति नै प्यारो छ । यहाँ तिर् बिसाउनै गाह्रो छ” । असफल प्रेमपछि पीडा भुलाउन नशालाई शहारा मानेर दुव्र्यसनको दलदलमा आफ्नो जीवन समाप्त पारेका थापाले वि.स. २०५६ साउन ५ मा बाघबजारको यात्री गेष्ट हाउसमा चोट र व्यथाले भरिएको जीवनको अन्तिम सास फेरेका थिए ।
लेखक ः नेपाल मगर विद्यार्थी संघका, केन्द्रीय सदस्य
पोउवा संघमा कर शिक्षा कार्यक्रम